Femi Otedola Diki Yemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
musha Africa Femi Otedola Upwere Hwenyaya Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeNigerian Billionaire anozivikanwa zvakanyanya sa "Otedola".
Yedu vhezheni yeFemi Otedola's Biography Chokwadi, kusanganisira yake Yehudiki Nyaya, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ongororo yeOtedola's Bio inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira uye kuti akabudirira sei. Zvikuru, mukadzi waFemi, hupenyu hwepauzima, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvidiki zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva nezvehupfumi hwake hwakanyanya uye bhizinesi rinochinja-chinja muchikamu che petrochemical. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveFemi Otedola's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Femi Otedola Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kutanga kubva, Femi Otedola akaberekwa musi we 4th waNovember 1962 kuIbadan mudunhu reOyo, Nigeria. Ndiye mwanakomana wechipiri pavakomana vana vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Lady Doja nababa vake, vanonoka changamire Michael Otedola. Tarisai, vabereki vaFemi Otedola.
Nyika yeNigeria yerudzi rweYoruba nemidzi yeWest Africa yakakurira muLagos State, Nigeria, kwaakakurira pamwe chete nevakoma vake vatatu, Ayokunle Otedola; Rotimi Otedola; naMuyiwa Otedola.
Mazuva Ekutanga Somwana:
Kukura muLagos, Otedola aive nechido chakasimba chehupirisita uye aida kudzidza pachikoro cheseminari kuti ave mupirisita mune ramangwana.
Kunyangwe Otedola aifarira kupinda muupristi, aisakwanisa kusiya hunyanzvi hwebhizinesi.
Femi Otedola Dzidzo uye basa rekuvaka:
Nezve dzidzo yaFemi Otedola, akaenda kuYunivhesiti yeLagos chikoro chevashandi uye akazoenda kuObafemi Awolowo University Ile-Ife, Osun State, kwaakawana dhigirii rake rekutanga mu1985.
Panguva iyo Otedola aive akura 6 muchikoro chepuraimari, akatanga bhizinesi rainzi FEMCO. Bhizinesi racho raisanganisira kugadzira manicure uye pedicure kumuenzi wemubereki wake, anobva abuditsa risiti kuvatengi vake ovabhadharisa basa raanenge aita.
Femi Otedola Yekutanga Yehupenyu Hupenyu:
Nguva pfupi Otedola anyoresa kuObafemi Awolowo University Ile-Ife, akatanga basa semushambadzi webhizinesi remhuri yake rekudhinda. Kushanda mubhizinesi rekudhinda kwakamuratidza kune zvakawanda zvebhizinesi zano.
Mushure mekunge awana humwe hunyanzvi mukuita bhizinesi rakabudirira, Otedola akapinda mubhizinesi remafuta negesi, izvo zvakamupa mikana yakasiyana yekukwanisa kuwedzera bhizinesi rake uye zvakaita kuti atange Zenon peturu yemafuta uye gasi mashoma mu2003.
Femi Otedola Biography - Mugwagwa Wemukurumbira Nyaya:
Zenon Petroleum Oiri neGesi zvishoma zvakagadzira mafambiro mazhinji emari nemari kuna Otedola sezvo ichigovera mafuta kumaindasitiri makuru ekugadzira muNigeria.
Otedola akawanawo mamwe mabhizinesi uye akagadzira makambani matsva nguva pfupi yadarika mushure mekutanga yake Zenon petroleum mafuta uye gasi mashoma.
Zvinhu zvaiita kunge zviri kufamba zvakanaka kuna Otedola uyo aive awana nezve 93% yemusika wedhiziri muNigeria panguva iyoyo kudzikira kamwe kamwe mumutengo wemafuta asina kuchena wakadzika kubva pamadhora gumi nematanhatu kusvika pamadhora makumi matatu nemasere muna146.
Kuderera kwemutengo kwakawana chikwereti chemadhora bhiriyoni 1.2 paOtedola achimusiya aine sarudzo mbiri; kuda kuzviuraya kana kutarisana nedambudziko racho zvakananga.
Femi Otedola Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Aine tariro, Otedola akatora nguva kurongazve nzira dzaaizoshandisa achipfuura nemudambudziko raakatarisana naro panguva ino.
Pasina nguva mushure meizvozvo, Otedola akazowana mwero uye hunyanzvi, izvo zvakaita kuti atore zita rekambani yake kubva kuAfrica petroleum kuenda kuForte Oil Plc.
Nekukurumidza kusvika parizvino, Femi Otedola, muzvinabhizimusi anotungamira muNigeria pamwe nerunyararo nemubhadharo wake wemanje wekupa zvipo zve # mamirioni gumi neshanu kune rwendo rwekurapwa rwekunze rwekunorapa kweaichimbova mukuru wepaguru michovha, Christian Chukwu. Zororo, sezvavanotaura, inhoroondo.
Femi Otedola Hukama Hupenyu:
Femi Otedola akaroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yazvino hukama chinzvimbo.
Kutanga, muzvinabhizinesi ane mukurumbira wekuNigeria aive nehukama naOlayinka Odukoya izvo zvinotungamira mukuzvarwa kwemwana wake wedangwe Olawunmi Christy Tolani Otetola, asati asangana nemukadzi wake Nana Otedola.
Hukama hwepamoyo pakati paOtedola naOlayinka hwakaguma apo amai vake pavakaziva nezve nhumbu yaOlayinka. Mushure mekunge Olayinka abereka Christy, akarambidzwa kuwana mwana naamai vaOtedola.
Pasina nguva mushure meizvozvo, Femi Otedola akabatanidzwa mumuchato unoera naNana Otedola. Muchato wavo wakaunza kuberekwa kwevanasikana vake vaviri, Florence Ifeoluwa, Elizabeth Temi nemwanakomana Fewa.
Femi Otedola Hupenyu Hwemhuri:
Otedola anobva kumhuri yepamusoro-yemhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezve hupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaFemi Otedola:
Michael Otedola ndibaba vaFemi Otedola. Akazvarwa mumhuri yechiMuslim pazuva regumi nematanhatu raChikunguru 16 uye akazochinja ave chitendero chechiKristu
Aive wezvematongerwo enyika wekuNigeria akashanda saGavhuna weLagos State pakati pe1992 kusvika 1993. Akafa pazuva re5th raMay 2014 kumba kwake muguta reEpe, Lagos.
Nezve amai vaFemi Otedola:
Lady Doja ndiamai vaOtedola. Akaramba akaroorwa nemurume wake, Michael Otedola kudzamara amurasa mu2014.
Lady Doja ane hanya nemwanakomana wake zvakanyanya pamoyo sezvo anga akamira akasimba naye kunyangwe akatarisana nedambudziko rake rakaomesesa.
Nezve hama dzaFemi Otedola:
Femi Otedola ane vakoma vatatu; mukoma wake mukuru Ayokunle, munin'ina wake Rotimi nemunin'ina wake Muyiwa.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvehama dzake dzambotaurwa uyezve iwo iwo maficha avo anoratidza kana iye aine hanzvadzi kana kwete.
Nezve hama dzaOtedola:
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro paambuya amai vaamai vaFemi Otedola pamwe nasekuru vake nasekuru nasekuru. Zvakare zvakare kunozivikanwa nezve babamunini naamainini pamwe nababamunini vake.
Femi Otedola Hupenyu Hwako:
Chii chinoita kuti Otedola akanganise? Gara kumashure apo isu tichikuunzira magadzirirwo ehunhu hwake kuitira kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake.
Kutanga, Otedola's Persona isanganiswa weScorpion zodiac maitiro.
Iye murume ane tarenda-akatarisana nebhizinesi ane hushingi uye anovimba mukugona kwake. Anoda kuita mabasa erudo uye akapa mipiro yakawanda kumasangano akasiyana muNigeria. Ane zvaanofarira uye zvaanofarira mukuita izvo zvaanoita zvakanyanya - bhizinesi.
Femi Otedola Mararamiro:
Otedola's ane mari inofungidzirwa kuti inokwana $ 1.85 bhiriyoni panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva kumativi emafuta uye bhizinesi raakange aita pamusoro pemakore apa ongororo yemashandisiro ake inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kutanga nemidziyo yaOtedola, iye - senge Aliko Dangote - ine dzimba dzakawanda dzeumbozha dziri mumatunhu akasiyana muNigeria.
Imwe yeimba yake yakasarudzika imba chena-chena ine imba ine dhizaini dhizaini dhizaini iri muIkoyi, nyika yeLagos. Imba ndimo maanogara iye nemhuri yake.
Muzvinabhizimusi wemabhirionari anewo maronda emota akasiyana anosanganisira; isina bulletproof Mercedes G-Kirasi, iyo Rolls-Royce Phantom mota, BMW 6 Series.
Iye zvakare ane Yacht iyo inosvika madhora makumi mana emamiriyoni kwaanocherekedza avo vaanoshanda navo bhizinesi zvese nemufaro.
Femi Otedola Untold Chokwadi:
Femi Otedola Forbes Chokwadi:
Ndiye wechipiri wekuNigeria mushure meAliko Dangote kuverengerwa kuForbes runyorwa rwemabhiriyoni akasarudzika nemamirioni emadhora emadhora 1.2 bhiriyoni uye akanyorwa semurume we29th mupfumi muAfrica naForbes Magazine mu2014.
Chitendero cheFemi Otedola:
Otedola akaberekerwa mumusha wechiKristu uye kubvira ipapo, akatsigira kutenda kwake kwakasimba uye kutenda muna Mwari. Achiri muKristu uye akave nechokwadi chekuti anotungamira mhuri yake zvinoenderana nekutenda kwechiKristu.
Thanks for reading vedu Femi Otedola Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!